Blogger of this week: saurav dhakal - MeroReport
Blogger of this week: saurav dhakal
पुर्खा घर सिन्धुली भएका सौरभ ढकाल काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्छन । युवा उध्यमशीलताको बिषयमा काम गर्न मन पराउने सौरभ पत्रकारिताका साथै भिडियो बनाउने, कथा बनाउने अनि तालिम र सल्लाह पनि दिने गर्दछन । उनि लेख्न र पढ्न भन्दा पनि बढी आँखा र कानका लागि र बिषेश गरी आँखाका लागि कथा बनाउने गर्दछन । पत्रकारितामा आठ बर्ष बिताएका उनले सुरुमा "बसुधा" पाक्षिक पत्रिकाबाट आफ्नो काम शुरु गरेका हुन । त्यसपछी लगत्तै कान्तिपुर टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । एक बर्ष यता अन्तराष्ट्रिय समाचार सम्पादनको काम गरिरहेका सौरभ यस साता मेरो रिपोर्टमा साताका ब्लगर हुन सफल भएका छन । सधैका साताका ब्लगरसंग जस्तै यसपाली हामीले सौरभसंग पनि ब्लगिङ, नागरिक पत्रकारिता र मेरोरिपोर्टका बिषयमा कुराकानी गरेका छौँ :
सन २००६ तिर शुरु गरेको आफ्नो फोटो ब्लग मेरो पहिलो ब्लग थियो । २००८ को भदौमा दमौली गएको थिए । त्यहाँ एउटा कथा बनाएको थिए । माछा माछा भ्यागुतो जसलाई इन्टर्नेटमा राखियो र त्यो मेरो भिडियो ब्लगको पहिलो शुरुवात थियो । लगतै यर्थात चित्र नाममा यस्ता भिडियो बनाउने काम गरे जसलाई नेपाल इन्फो पार्क डट कम डट एपि मा राखेको थिए । यस अघि पनि केहि कथा इनटरनेटमा राखेको थिए । तर ती इन्टरनेटकै लागि भनेर चाँही बनाएको थिएन । अहिले बिगत १५ महिना यता कथा चक्र स्टोरिसाइकल डट कम मार्फत सचित्र कथा भिडियो ब्लगिड गर्दै छु ।
रिपोर्टिङ वा कथाका लागि बातावरण, युवा प्रविधि अझ भनौ प्रकृति र प्रविधि अनि त्यो सँग जोडिएका जीवन मलाइ मन पर्ने बिषय बिषयबस्तु हुन । मेरो अहिलेको समय कथा खोज्ने, तयार गर्ने , इन्टरनेटमा राख्ने, संभव भए टेलिभिजनका लागि प्रसारण गर्ने (जसले पनि बजाउन पाउने ) र फेरि त्यो कथालाई सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्ने काममा लागि परेको छु । यसलाई हामी कथा चक्र भनिरहेका छौ । यो चक्रमा कथा जसको हो उसले पनि हेर्न सक्छ , जो सँग मुलधारका संचार सुविधा छैन उसले आफनो मोवाइलमा वा सार्वजनिक समारोहमा हेर्न सक्छ । कथा बनाउन र भन्न चहानेले बनाउन सक्छ ।
काम अलि झन्जटिलो देखिन्छ तर यसमा मजा छ । मुलधारले उठाउन नसकेको बिषय हामी उठाउन सक्छौ । फेरि मुलधारमा पत्रकारिता ठूलो कुरा हो भन्नेहरुका लागि यो नयाँ धार पनि हो । जो कोहि कथा भन्न सक्छ । साधन र सुविधा अनुसार कथा फरक हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
सामान्यतया प्रकृतिका कुरा, जीवनशैलीका कुरामा कथा तयार गर्छु । मुलधारमा नअटाउने कति घटनाहरु आफनो शैलिमा पस्कन पनि यो कथाचक्र प्रयोग गर्छु । इन्टरनेट सवैका लागि हुनु पर्छ र यसमा जति आफुले राख्यो त्यति निकाल्न पाइन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसैले कथाहरु इन्टरनेटमा पनि हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ अनि अपलोड गर्छु । सामान्यतया लेख्ने भन्दा भिडोयो स्टोरि बनाउन केहि समय लाग्छ । हेर्न पनि केहि समय लाग्छ तर अहिले नै यस्ता स्टोरिको संख्या थपिएन भने जब इन्टरनेटको गति बढछ त्यति बेला हाम्रो भिडियो कथाहरु कम हुन सक्छन् त्यसैले भिडियो वा मल्टिमिडिया रोजेको हुँ ।
ब्लगले नेपालमा राम्रो स्थान पाएको छ । धेरै राम्रो ब्लगहरु छन् । जसको बिश्वसनियता पनि बढी छ ।
म गएको छ महिनामा देशका १२ जिल्लाहरु जाने मौका पाए जहाँ कसरी कथा बनाउने भन्ने बिषयमा सो क्षेत्रका साथीहरुसँग छलफल र सिक्न पाए । त्यो नै मेरो लागि ठूलो अवसर हो ।
मुलधारको परिभाषामा नै बिस्तारै परिवर्तन आएको मान्नु पर्छ । लगानी आधारमा छुट्याउने हो भने एक कुरा पाठक वा दर्शकको संख्याको हिसावले कुरा गर्दा नया संचार अर्थात ब्लग मुलधार भन्ने गरिएका संचारको प्रभाव भन्दा कम छैनन् । अझ सजिलो चाँही परम्परागत पत्रकारिता र नयाँ पत्रकारिता भन्दा राम्रो होला । जे होस मुलधार भन्नेहरुले नागरिक सवाल नउठाएका होइनन् छन् तर ती प्राय ब्यापारिक तहबाट चेपिएका हुन कि जस्तो लाग्छ । जस्तै गएको भुकम्प पछि धेरै बिषयमा कुरा उठन सक्छन् । नया अपार्टमेन्टको सुरुक्षामा खासै कुरा उठेको हुन्न । उपभोक्ता हितका बिषय छन् । तर बैकको एटिएमको बिषयमा कुरा उठदैनन् । मुलधारका मुल पात्रहरु प्राय एकै हुन्छन् । १० बटा पत्रिका हेरयो भने प्राय एकै खालका वा एकै पात्रहरु, कसैले काठमाडौमा सानो कफि सप खोल्यो भने ठूलो फोटो सहति चर्चा हुन्छ । तर काठमाडौका चाहिने भन्दा महगा कफि सप र पसलहरुको बारे चर्चा हुन्न । राजनैतिक चपेट त झन छँदै छ ।
पत्रकारिता आफैँमा एउटा सामाजिक पेशा हो । यो अन्य पेशासँग सजिलै तुलना गर्न सकिन्न । जब यो पेशामा काम गर्ने भन्ने मानसिकता बनाइन्छ यसका केहि मान्यताहरु सँगसँगै आउछन् । टिक्ने कुरा पनि सोहि मान्यता जस्तै हो । चुनौति धेरै छन् । मुख्य चुनौति संचार माध्यम भित्र नै छ । संचार सस्था संचालक र पत्रकारको सुरक्षाका बीचमा केहि खाडलहरु छन् । मालिकहरु पत्रकारको आर्थिक सुरक्षालाई खासै महत्व दिदैनन् । संचारकर्मीहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ जसले समग्र पत्रकारको सुरक्षा र बिकासको कुरा हुन सकेको छैन् ।
मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारिता बीच के फरक पाउनुभएको छ ?
मुलधार भन्ने पत्रिकारितामा धेरै सम्भावना छन् । प्रबिधि छ, ठूलो समुह छ, लगानी छ र त्यो सँगसँगै बजार छ । यसले साँचो अर्थमा ठूलो प्रधाव पार्न सक्छ । बिषयगत हिसावले होस वा पत्रकारिताको बिकासको हिसावले । तर ब्लग नयाँ अनुसन्धान पनि हो । नयाँ प्रयोग । जसले मुलधार भनिएकाले गर्न नसक्ने काम गर्न सक्छ । संचार क्षेत्रमा जनताको पहुँच बढाउन सक्छ र बढाएको पनि छ । ब्लगले अभियान चलाउन सक्छ । झन मुलधारलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
तपाईंलाइ पनि थाहा होला, यतिबेला हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ ?
आचारसंहिता हुनु राम्रो कुरा हो । यसले एकातिर ब्लगरहरुलाई एक ठाँउमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ । तर कुनै बेला हामीले अनलाईन पत्रकारिता र ब्लग पनि छुट्याएर हेर्नु पर्छ होला । ब्लग आफैँमा स्वतन्त्र र नैतिकता भन्दा बढी स्वतन्त्र बिषय हो भन्ने मान्यता पनि छ । तर सामाजिक मान्यता र सुरक्षाका लागि यो आचार संहितालाई अनौठो मान्न जरुरी छैन् ।
सहभागिता मुलक छ । जुन साहै राम्रो सस्कार हो । म जहिले पनि सामाजिक संजाललाई हाम्रो सामाजिक अवस्थासंग दाज्ने गर्छु । समाजमा जहिले पनि एक समुह हुन्छ जुन जे का लागि पनि अब्बल जहाँ पनि भेटिने, जे पनि गर्न सक्ने तर त्यो समुह सजिलै पनि प्रभावकारी र उत्पेरक नकारात्मक पनि हुन सक्छ ।
मेरोरिपोर्ट अझ बढि यो संजाल भन्दा तल वा फराकमा जानु पर्छ ।
तपाइको ब्लगलिँक : www.storycycle.com
Comment by Rabindra Basnet on October 13, 2011 at 6:04pm
Congratulations, Saurav !!!
Comment by Saurav Dhakal on October 13, 2011 at 5:29pm
Thanks to meroreport and all
Comment by archana hengaju on October 12, 2011 at 7:27pm
Comment by Ajeeta Sigdel on October 12, 2011 at 12:17pm
Congratulations Saurav ji !!
Comment by Rupen on October 12, 2011 at 11:47am
Congratulation Saurav ji!